B ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ချန်ထက်ထက်၏ ၁၂ နှစ်မြောက် မိန့်ခွန်း - Pandaily
Jun 28, 2021, 23:08ညနေ 2021/06/29 06:04:53 Pandaily
Chen က B community development နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောသွားတယ်။ “B Station က tool မဟုတ်ပေမယ့် community group. community group. community building. community group ဆိုတာထက် people of community, cultures. cycle government of community of community of community of community of commanding”
ယခင္ႏွစ္မ်ားက B တြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာငါးခုသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုးက႑ျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးရာဌာနမ်ားက လူသား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ တိရစၧာန္၊ အစားအစာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ Colope Content ကို ၾကည့္႐ႈမႈ ႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို့ပင်လျှင် ချန်က “ACG အကြောင်းအရာကို အလေးပေးနေဆဲဖြစ်ပြီး B stand အားလုံးတွင် အပြင်းထန်ဆုံး” ဖြစ်သည်။ ယခုႏွစ္ Q1 တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Animation ႏွင့္ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ ၾကည့္႐ႈမႈပမာဏသည္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ACG တြင္ ပါ၀င္မႈ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
နောက်ဆုံးရရှိသော စာရင်းများအရ MAU စခန်းသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် B မှ ၂၂၃ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အသက် ၃၅ နှစ်နှင့် အောက်ရှိ တရုတ်လူငယ်များ၏ ထက်ဝက်နီးပါးသည် B ဘူတာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ ထို႔အျပင္ ဖန္တီးသူအေရအတြက္မွာလည္း လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေနသည္။ ပထမသုံးလပတ်မှာ တစ်လကို ၂.၂ သန်းလောက် အသက်ဝင်အောင် တင်တယ်၊ တစ်လကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဗီဒီယိုပေါင်း ၇.၇ သန်းလောက် ဖန်တီးကြတယ်။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈက သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။
Chen က “လက်ရှိမှာ Pan Knowledge Content Account B ရဲ့ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှု စုစုပေါင်းရဲ. အသုံးပြုသူ ၁၁၃ သန်းကျော်ရှိနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က B Station ကို လေ့လာသင်ယူမှု သုံးဆကျော် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်” လို့ တရုတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအရေအတွက်ကို ပြောပါတယ်။ ဇီးအုပ်အတွက် သားစဉ်မြေးဆက် ဗီဒီယိုက အသိပညာပြန့်ပွားဖို့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပမာတခုကတော့ တရုတ်ပြဇာတ်ဟာ “နိုးကြားတဲ့ခေတ်” ဆိုတဲ့ သမိုင်းကို လေ့လာဖို့ အစောပိုင်း ကာလတွေမှာ အထက်တန်းကျောင်းသား အများအပြားကို လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။
Chen က B Station ကို ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး Traffic, Creation, Creative Tool, Training System စတာတွေကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုတင္ထားတဲ့ ယာဥ္ေၾကာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ခ်ထားေပးတယ္၊ အသစ္တင္တယ္” Chen B Stand ၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ မက္လံုးအစီအစဥ္သည္ လက္ရွိတြင္ ၃၈.၇ သန္းအထိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ Purpose တင္သူ ၁၁.၁ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာသည္။
Q1 ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ B Station အသုံးပြုသူတွေဟာ ပျမ်းမျှ အသုံးပြုချိန် ၈၂ မိနစ်အထိ ကြာမြင့်ပြီး အသင်းဝင်နှုန်းက ၁၂ လဆက်တိုက် ၃ နှစ်ဆက်တိုက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာ ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော် ရပ်ရွာအတွင်း အရွယ်အစား တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိုးရိမ်မှုတချို့ ရှိနေသည်။ B Station သည္ မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Avalon စနစ္သည္ ဉာဏ္ရည္တုကို အေျခခံေသာ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ဗံုးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝန္းကို အႏုတ္လကၡဏာျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္ Bull 70.0 မီလီယံမွ်ကို အလိုအေလ်ာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဗံုးပိတ္သည့္ ျမင္ကြင္းအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမွာ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။
B Station က လူအများ စိတ်ပါဝင်စားမှု ပိုများလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ B Station ၏ ဒုဥက္ကဌနှင့် COO Li Nicole သည် မင်္ဂလာတောင်ညွန့် B Station ကို တည်ထောင်ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ကျေးရွာ ပညာရေး ထောက်ပံ့ကြေး ၄၁၉၄၁၇၂ ယွမ်ကို စတင်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Topics: မြင်ကွင်းB Station Hong Kong Listed Post ပထမသုံးလပတ်တွင် Caixi
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး B Station ကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ရှန်ဟိုင်း အနောက်အလယ်ပိုင်းက Junction နဲ့ Shanghai အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာ မူဝါဒချမှတ်ပေးနေတာဟာ ယူနန်ပြည်နယ်၊ Dali Shangham စီရင်စု၊ Guizhou စီရင်စုမှာ ပူးတွဲတည်ထောင်ထားတဲ့ “B Station Beautiful Private Private Privary “နဲ့ “B Station Dreams” တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုႏွစ္တြင္ B Station ကို ယူနန္ျပည္နယ္ ဟြာပင္းေကာင္တီမွ စတင္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းႏွစ္ခုတြင္ Elwa Dream အမည္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ B Station အမည္ရွိ မဂၤလာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိသည္။
“လူထုဟာ B Community တစ္ခုလံုးရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုပါပဲ” ဟု လီဇီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “User ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Push ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ B ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Stand ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်၊ ဗဟုသုတနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုပိုကြီးတယ်၊ ဒီလိုမျိုး နွေးထွေးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Byry-tv Creation Platform B ဘူတာရုံတွင် စက်ခန်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် ခေတ္တသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
အဂၤါေန႔ညက Bဘူတာရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြ အကုန္ခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူေတြ စုိးရိမ္မႈေတြ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆာဗာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ကုမဏီရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေ တစ်ခါတည်း ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။